Milan ukuya eRoma Ngololiwe iTrenitalia ku 3 hours | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Milan ukuya eRoma Ngololiwe iTrenitalia ku 3 hours
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 13/07/2020)
EMilan ukuya eRoma By Train okanye eRoma eMilan ingaba i-lula kwaye iyanelisa amava. Hayi umzekelo-icatshulwe beautiful! Ungathatha i uloliwe ingabizi ezinokuthatha ixesha elide kune 3 iiyure kodwa ezoLoliwe ukusuka eMilan ukuya eRoma ikuvumela ukuba weqe apha kuyimfuneko zokumisa ukuba ukuhlola. Okanye ungatsiba kwisitayile esingamaTrenitalia kwisantya esiphezulu seFreccia, leyo ethatha nje 3 iiyure kwaye 3 imizuzu, ingaphantsi kohambo olupheleleyo ngenqwelomoya! Nokuba yintoni na oyithathayo!
Bahamba umgama: 297 miles
Uzile ixesha: 3h:03m
Yonke imihla oololiwe: 89
Amatikiti oqeqesho eMilan ukuya eRoma aqala ukusuka :$51
Best umnikezeli Train iTikiti: Save A Train of course
Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye wenziwa ngu Gcina oLoliwe oMatikiti amaxabiso aphantsi Iwebhusayithi kwiHlabathi.
Milan eRoma Train & ERoma To Milan By Train: I-Scenery
Zilungiselele ukuba ezinye ubuhle emangalisa ngokwenene njengoko wamkhwelisa Italy Lombardy ezantsi, Emilia Romagna, nemimandla Tuscany. Abaninzi Trenitalia Freccia AV oololiwe yima kwi-Bologna, Padua okanye genoacity in italy xh indlela eya Eroma. Kwi ngokukhawuleza emiselwe kwezo ndlela, akuyi kufuneka ukuba oololiwe utshintsho. kunjalo, ukuba uhamba kuloliwe kancinci futhi engabizi zengingqi, nibe kufuneka kunikelwe ukusuka kwesinye ukuqeqesha komnye. Ukuba ngaba ayikho njengomzi kwaye ufuna ukwenza kwakho Milancity in italy Eroma Yi-Ukuqeqesha uhambo, ngoko ke ndithanda recommend olu khetho. Apha kukho iphawula!
Kunye milancity in italy njengoko yayo eyinkunzi, akumangalisi ukuba iindwendwe umhlambi izigidi zabo Lombardy ngonyaka nganye. Kodwa ngaphaya fashion ozithandayo, kuninzi ngakumbi kufuneka kutyelela iindawo kummandla Lombardy of Italy abakhala kutyelelwa.
Kukho countless izinto ukwenza kule ngingqi; ifune ezazikayo iinqaba ku amachibi amahle, makhaya violin kuzo zonke iingingqi u kwi-historic izixeko, being amazed at the art and architecture of Mantua – Lombardy really packs a punch for visitors.
I-Milan eya eMantua itikiti lesitimela
I-Turin ukuya kwitikiti lesitimela seMantua
I-Padua ukuya kwitikiti lesitimela laseMantua
I-venice eya kuMantua kwitikiti lesitimela
Sikholelwa Emilia Romagna lula lilingana ezinomtsalane ngakumbi yagubha Tuscany kunye Lombardy namaqhuzu iinketho temptingly ukuzithengela ukutya ngaphandle kwaye yokuhlala. Yi i EMilan ukuya eRoma Ngu Train uhambo kugcinwa kakuhle ezisincedayo uluvo lwethu kodwa eRoma eMilan ngololiwe! Ukutsiba ngaphandle ngeli sovavanyo kwaye yiya exploring!
Bolognia ku Modena Uqeqesha
EVenice ku Modena Uqeqesha
Genoa ku Modena Uqeqesha
UFlorence Modena Uqeqesha
Kukho ke izinto ezininzi ukwenza kwi-Bologna xa abajikelezayo ukusuka UMilan ukuya eRoma ngoololiwe bakaTrenitalia. Sicebisa oku njengoko omnye phezulu amachaphaza ukuze iqwalasele jumping ngaphandle at. Khwela medieval kweencopho, incwadi ezithathwa fun ukudla. Ukuba ufuna ukuhlala ixesha elide oku kwenza isiseko esikhulu lokufundisa ezinye izinto ezinomtsalane kule ndawo.
I-venice eya eBologna itikiti lesitimela
UFlorence ukuya eBologna itikiti lesitimela
IRoma ukuya kwitikiti lololiwe laseBologna
I-Milan eya eBologna itikiti lesitimela
Ngaphantsi kwe 30 hambo lwemizuzu kwi speed eliphezulu uloliwe e Venice, Padua kakhulu rhoqo disregarded ukususela uninzi visitors. kodwa, lenza kuba mhla mkhulu uhambo ukusuka Venice, kokunikela indalo kusityhilela okuninzi ubutyebi bembali umzi ukuba yake kwaba Thethani enamandla.
Ekhaya ku Italy yesibini eyunivesithi endala, yasungulwa ngo 1222, Padua sele retained i-vivacious atmosphere a ngezifundo town, kunye piazzas emihle kunye izitrato arcaded, Nentabalala cafes nemivalo apho Spritz ikuyo le de rigueur njengemimoya mini ukungena kwabo phakathi kwahlwa. Ungaphoswa ngaphandle!
EMilan ukuya wasePadua Uqeqesha
Verona ku wasePadua Uqeqesha
Bologna, ku wasePadua Uqeqesha
Bergamo ku wasePadua Uqeqesha
Ngokuba ubani owayehamba Milan ukuya eRoma nge Trenitalia Oololiwe okanye enye indlela ejikeleze indlela kwaye uyiyo ikhangela a kulinywa nzulu zidibene, badla unvarnished futhi ngesibindi lakwa- ulwazi zokuhamba.
Sikucebisa ukuba ungene eGenoa (leyo efana Venice kwaba kanye anamandla maritime kwiriphabliki) fronting i-Ligurian Yolwandle. Uhambisa amava ekrwada ngakumbi real, fumana i-undiluted uluvo imbali, kunye namava oxygen ndawo art etyebileyo izakhiwo oluphawulekayo. One of the top reasons we enjoy it so much is that kukho ubuciko olukhulu kunye neemyuziyam baba baninzi! Ungafumana imisebenzi ngo Caravaggio, Van Dyck. Rubens, Durer kwaye Veronese kwi-Palazzo Bianco kwaye Palazzo Rosso kwaye oglegenericname ezinye Ubudala Ihlabathi masterpieces ngeendlela ezininzi landmarks, efana Palazzo Reale kwaye Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Kukho kanjalo kakuhle imizekelo i-Genoese Yesikolo ka-unguye, bavelele ngenkulungwane ye-17, kwi-Palazzo Blanco.
Milan To eRoma & ERoma To Milan Train Times
Isantya Trenitalia ephakamileyo High Speed (AV) oololiwe ashiye kanye okanye kabini Milan Station Central ngeyure yesikhululo eRoma Termini - avareji 90 oololiwe ngosuku. Le yokuqala Trenitalia Amagqabi Uloliwe Central Station Milan kwi 5:00 a.m. Yokugqibela ukuqeqesha Eroma amagqabi milancity in italy at 11:18 p.m.
Qaphela oko ngeempelaveki neeholide ngokuqhelekileyo kuthetha inkonzo ngaphantsi rhoqo kunye namaxesha zokuhamba maxa wambi elide.
UMilan uya eRoma kwitikiti lesitimela
IRoma ukuya eMilan kwitikiti kaloliwe
Izinto ezikwiiLoliwe zeFreccia phakathi kweMilan <> eRoma
Uninzi koololiwe AV Trenitalias Frecciargento ukwenza uhambo lwemihla ngemihla phakathi Milan neRoma nje 3 iiyure kwaye 3 imizuzu, abajikelezayo phezulu 155 miles / 250 ngehora.
Amatikiti e-Italia aphakamileyo asezitreyini aphezulu anezongezelelo. Indawo yombane esihlalweni sakho ukuze ubize izixhobo kunye neWiFi ekhwele iFrecciarossa kunye noololiwe beFrecciargento. kunjalo, uphawu luya kwehla ngelixa ungaphakathi imigudu kanti kwizikhululo. Unokuba ne-cafe enkulu yase-Itali emotweni yokutya kuloliwe ngamnye. Njengoko kwakunye njengokuba ixinzelelwa phantsi inqwelo ukutya ezisa okulula, sandwich, kunye neziselo esihlalweni sakho. Ekupheleni imoto ngalinye, uya kufumana yangasese nenala amanqwanqwa yokugcina imithwalo emikhulu.
Kukulungele ukupakisha iingxowa zakho kwaye uphonononge iMilan ukuya eRoma ngeeTrenitalia Trains okanye enye indlela ejikeleze – IRoma ukuya eMilan ngoLoliwe phakathi 3 hours? Enoba ukhetha, Bhuka amatikiti akho kaloliwe kwimizuzu ngoncedo lwe Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “UMilan ukuya eRoma Ngololiwe weTrenitalia” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/milan-rome-train/ – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
europetravel Italybytrain milan milano mila trainjourney travelrome